ChiGerman, Germany Ndingakurumidza sei kusvika padanho randinoda? - CHIJERIMANI
Iwe unofunga kwenguva yakareba sei ini ndinogona kuuya kumunhu waidiwa?
« : Gumiguru 04, 2014, 04:10:20 pm »
Ini ndinobva kuAnatolian High Chikoro, saka ndine ruzivo rweGerman. Ndichaita internship muzhizha rino uye ndiri kufunga kuzviita kuGerman.Ndiri kuronga kutanga kushanda muchiGerman. Asi vashoma veshamwari dzangu vanoti chiGerman chakaoma (zvichienzaniswa nedzimwe mitauro) .Ndinoshamisika kuti ndeipi nhanho yandinogona kusvika mugore rimwe chete, kana ndine shamwari dzakatanga kare, padanho ripi. Uye ini ndine yakanaka yekuenderera mberi nedzidzo yangu kuGerman yedzidzo yepamusoro mushure memakore maviri. Chirungu changu chiri nani kwazvo kupfuura chiGerman, ndinoshamisika kana ndichifanira kurodha Chirungu chete?
Re: Ndingakurumidza sei kusvika padanho randinoda?
« Reply #1: Nyamavhuvhu 04, 2015, 12:26:35 am »
Iko hakuna chinhu chakadai sekuoma, shamwari yangu, unoenda sekuda kwako, nzwisisa pfungwa nekuisa mumusoro mazwi nezviito, gadzira chirevo pachako, zvakare unogona kuona mabhaisikopo neTurkey zvinyorwa zveGerman kana zvinopesana. Iwe unozoti "zuva" paunoti "pano", watarisa, wave kushandurira nziyo muchiTurkey. Siya Grammar yekupedzisira uye kana iwe ukapinda muGrama pasina chaunoziva, iwe uchavhiringidzika uye hapana chaunonzwisisa. Isu hatidzidze girama kana tiri vacheche, mushure mezvose, isu tinotanga kunzwa, tobva tanzwisisa, tobva tataura. Sekuru vangu vanoziva chiGerman, ndinofunga ndinomutuka senge chiito chechimiro chechimiro, asi anoti kana iwe uchitaura, zvingave zvirinani ukasataura izvozvo, pachinzvimbo chezwi iro, iye anopawo zviye zvinoitika seizvi.